कसरी Photoshop तत्वहरु नि: शुल्क कानूनी र सुरक्षित प्राप्त गर्न
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Photoshop Elements: शुल्क डाउनलोड
द्वारा Eva Williams, Naveen Pokhrel 2022-01-18, Nepali Blog
लाइसेन्स: $ 99.99
डाउनलोड: ५k के
तपाइँलाई थाहा छ कहाँ र कसरी एडोब Photoshop Elements: शुल्क परीक्षण प्राप्त गर्न को लागी? के यो खतरनाक र एक pirated संस्करण डाउनलोड गर्न अवैध छ? 2022 मा सबैभन्दा राम्रो विकल्प के हो? तल तपाइँको सबै उत्तरहरु खोज्नुहोस्।
एडोब Photoshop तत्वहरु सम्पादन को लागी एक काफी सरल Ps संस्करण हो (कसरी नि: शुल्क Lightroom प्राप्त गर्ने बारे मा अधिक जान्नुहोस् वा Photoshop मुक्त डाउनलोड गर्नुहोस्)। यद्यपि यो सस्तो र प्रयोग गर्न सजिलो छ, यो सम्पादन को लागी धेरै शक्तिशाली कार्यहरु छन्। कार्यक्रम को मद्दत संग, तपाइँ सजिलै संग तपाइँको छविहरु लाई हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ, कीवर्ड संग उनीहरुलाई ट्याग गरेर र एल्बमहरुमा उनीहरुलाई राख्न। यसबाहेक, स्वचालित अनुहार पहिचान र ट्याग को मद्दत संग, तपाइँ केहि सेकेन्ड मा एक निश्चित व्यक्ति पाउन सक्नुहुन्छ।
पछिल्लो एडोब Photoshop तत्वहरु 2022 संस्करण छिटो काम को लागी बनाईएको थियो। जब तपाइँ यो फोटो सम्पादन अनुप्रयोग, तपाइँ स्वचालित रूपमा बनाईएको स्लाइडशो, साथ साथै फोटो र भिडियो कोलाज मुख्य स्क्रीन मा देख्नुहुन्छ। एक कदम द्वारा कदम गाइड र स्वचालित प्रकार्यहरु संग, तपाइँ सुन्दर तस्बिरहरु सम्पादन मा एक शौकिया भएको हुन सक्छ। यो कार्यक्रम शुरुआती को रचनात्मक विचारहरु लाई महसुस गर्न को लागी एक महान उपकरण हो।
तपाइँ तपाइँको पोस्ट-प्रोसेसिंग छिटो र पेशेवर बनाउन नि: शुल्क Photoshop कार्यहरु, नि: शुल्क Photoshop ओवरले, नि: शुल्क Photoshop बनावट, र नि: शुल्क Photoshop ब्रश डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ Photoshop चित्रहरु छिटो र पेशेवर गर्न चाहानुहुन्छ तर तपाइँ Photoshop मा नयाँ हुनुहुन्छ, यद्यपि यी Photoshop ट्यूटोरियल कि सजीलो र बुझ्न को लागी हेर्नुहोस्।
OS: विन्डोज, macOS
RAM:4जीबी रैम (8 जीबी सिफारिश)
CPU: १.6 GHz वा छिटो प्रोसेसर / -४-बिट मल्टीकोर इंटेल प्रोसेसर
Filename: PhotoshopElement_2021_LS30_win64.zip (डाउनलोड)
Filename: PhotoshopElement_2021_WWEFDJ.dmg (डाउनलोड)
Filesize: १०.४ एमबी
Photoshop Elements को लाभ
Photoshop Elements: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्